ချောက်မြို့နယ်မှ လ့ဝ့ကဝန်ထမ်းတွေအကျင့်ဆိုးမဖျောက်နိုင်ကြသေး ~ Myaylatt Daily.
6:45 PM လူထုအော်သံ No comments
"ကလေးမနှစ်ယောက်ကရန်ကုန်ကိုအလုပ်သွားလုပ်ကြမှာ အငယ်မက ၁၈နှစ်မပြည့်သေးဘူး အလုပ်ဝင်ဖို့ကလည်း ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖြစ်မှာဆိုတော့ တာဝန်ခံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်အောင်( )နဲ့ညှိပြီးလေးသောင်းပေးလုပ်ခဲ့ရတယ်"လို့အဆိုပါဦးအောင်မြင့်မှပြန်လည်ပြောပြလာပါတယ်။
မြေထိန်းနံရံ ဆောင်ရွက်မှု ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
မင်းတုန်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကျပ်သိန်း(၃၅၀)ဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်တုန်းမြို့န...
ကျောက်ထုဒေသတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲ...
မကွေးမြို့ပေါ်တွင် လူတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်၍ သေဆုံး
မြေလတ်ဒေသ နေ့စဉ်သတင်းစာ အွန်လိုင်း နှင့် ဖုန်း မြေ...
မြို့နယ်လုံးကျွတ် ကျောင်းအပ်နှံရေးနေ့ ကျင်းပ
မြို.နယ် ကျောင်းအပ်နှံရေးနေ.အခမ်းအနား ကျင်းပ
ရေနံမကျေးရွာ NLD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုဇော် နှစ်(၄၀)...
ဒီကနေ့ ၂၈၊၅၊၁၅တွင်မကွေးတိုင်း NLDရုံးမှာကျင်းပ။
ယနေ. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် နှင့် ၈၈ မျိုးဆ...
၂၇၊၅၊၂၀၁၅ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မကွေးတိုင...
NLDနဲ့ 88 နိုင်ငံရေးပူးတွဲကြေညာစာတမ်း
လျှပ်စစ်ကို ပေါ့ဆစွာအသုံးပြုခြင်းေ ကြာင့်ဓာတ် လိုက...
မိုးဦးမိုးနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ရွာ သွန်းမှု့ကြောင့် မြေ...
တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ...
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဒုတိယ၀န်ကြီး( စီမံ ...
တောင်တွင်းကြီး ဆည်မြောင်း(ထိန်း)နေစားများ၏ လစာမရတာ...
မကွေးမြို့ ၊ စက်မှုတိုင်း(၃) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန မိ...
မြေလတ်မီဒီယာဂျာနယ် သတင်းထောက် နတ်မောက်သားမြွေဟောက...
မြေလတ်ဒေသ နေ့စဉ်သတင်းစာ အွန်လိုင်း နှင့် ဖုန်းြေ...
စလင်းမြို့နယ် ရဒေးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကွင်းအမှတ...
မကွေးမြို့ နန်းထိုက်သူဟိုတယ်မှ ၂၃-၅-၂၀၁၅ ည NLDပါတီ...
စာသင်ကျောင်းများ အဆင့်မြှင့်တင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီး
ချောက်မြို့မရဲစခန်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များရေအတွက်အနေ ခက်နေ
တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်အတ...
မကွေးမြို့၊ စက်မှုတိုင်း (၃) ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန မိ...
ယနေ. နတ်တလင်းမြို.တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ၁၀၀ေ...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပျော်ဘွယ် မြို့နယ် ကျေးရွာများ...
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပြည်သူ. ကျန်း မာရေးဖောင...
မင်းလှမြို့ကားကွင်းအတွင်းသိန်း ၅၀ ကျော်ဖောက်ထွင်း...
၂၀၁၅-ခုနှစ်|မေလ အဋ္ဌမတန်း|စတုတ္ထတန်း ဘာသာရပ်အလိုက် ပြ...
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မှတ်ပုံတ...
ပွင့်ဖြူ အမက(၁)၌ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပြီးစီး
စန္ဒာ-သူရိယ ကျန်းမာ ပညာကူညီရေးအသင်း(တောင်တွင်းကြီြး...
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ တာဝန်ယူမှုတ...
ကမ္ဘာ့စံချိန်လွန် မြန်မာတို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဘွယ်ရာ ...
မြန်မာရေလုပ်သား ဒုက္ခသည်တစ်ဦး ဂန့်ဂေါသို့ပြန်လည်ရေ...
မင်းလှမြို့နယ်တွင် တရားမ၀င် ဓါးကိုင်ဆောင်သူကို အရေးယူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည...
သရက်မြို့ ရုံးရပ်ကွက် ကမ်နားလမ်း ရေမှတ်တိုင် ဧရာဝတ...
လောက်ကိုင် ဒေသ ဖုန်ကြားရှင် ပွိုင့်-၂၂၀၂ တောင်ကုန်...
လေပြင်းတိုက်၍စာသင်ကျောင်းအမိုး လန်ခြင်း နှင့်လူနေအ...
မြစ်သာမြစ်ကူး မြစ်သာ-၁(မင်းရွာ)တံတား ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
၂၀၁၅ခုနှစ် အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေ့း လှုပ်ရှားမှု ဂုဏ်ပြ...
မကွေးမြို့နယ် ကန်ဦးကျေးရွာတွင် ပညာတန်ဆောင် စာကြည်...
လယ်ရီဂျေဂင်ပြောတဲ့ တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်း အပြောင်းအလဲ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးကြည...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ မြန်မာပြည်ရဲ့ အြ...
ပခုက္ကူမြို့ပေါ်တွင် ဒေသခံပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲကျ...
မြစ်သာမြစ်ကူး မြစ်သာ-၂(ပျားရွာ)တံတား ဖွင့်လှစ်
ဧက(၁၀၀)ပုလဲသွယ်အထူးအထွက်တိုး စပါး စိုက်ခင်းအားစုပေ...
တောင်တွင်းကြီးမြို့ရှိ အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းနှင့် ပရဟ...
(၁၇)ကြိမ်မြောက် ဆရာအတတ် ဒီပလိုမာ/လက်မှတ် အပ်နှင်း
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်က စစ်ရဟတ်ယာဉ်မျ...
ပေါက်မြို့၊ အောင်တံခွန်တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဆေးရုံဝန်း...